बैदेशिक रोजगारीको पिडा – Gulmiews
बैदेशिक रोजगारीको पिडा
April 8, 2015 Sanju Kauchha
No comments	प्रकाश भण्डारी “बिबेक”
नेपाल विश्वकोे गरिब राष्ट्रहरुको सूचिमा अग्र स्थानमा रहेको पाईन्छ । नेपालको कूल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा हाल पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पुरातन सोच र रुढिबादी परम्परा आदि बिबिध दृष्टिले गर्दा नेपालको गरिबी बढेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । विगतमा नेपाल जस्तै गरिब अवस्थामा रहेका राष्ट्रहरु हाल गरिबीको अवस्थामा उल्लेखनीय रुपमा कमी तथा गरिबी हटाउन धेरै सफल भएका छन् । तर नेपालको गरिबीको अवस्था उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको पाईन्छ । बिद्यमान गरिबी आर्थिक सामाजिक विकासको बाधकका रुपमा देखा परेका छन् ।
नेपाल एक भुपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । जहाँ देशको अर्थतन्त्र बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स बाट धानिएको छ । देशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना नहुनु, राजनितीक अस्थिरता, बेरोजगारी जस्ता कुराहरुले गर्दा देशको झन्डै आधा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीको लागी जान बाध्य भईसकेका छन् । मानिसलाई नभई नहुने तिन अत्याबश्यक कुरा गास, बास र कपासको सरकारले ग्यारेन्टि गर्न नसक्दा यसरी दिनानुदिन बैदेशिक रोजगारीको लागी दक्ष जनशक्ति हरु पलायन भएको पाईन्छ । न्यून आयश्रोत भएको परिवार त्यसैमा पनि घरपरिवार पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी आफनो काँधमा भएकोले यसरी दक्ष युवाहरुले बैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्नु परेको छ । दिनानुदिन लाखौँकोकार्यक्रम पनि नल्याएको होइएन तर त्यो प्रभाबकारी हुन सकेन । यस्ता कार्यक्रम सतही र बेरोजगार युवाहरुको सहानुभूति लिने खालको मात्र थियो ।
बर्तमान सरकारले पनि युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनमा कुनै पहल गरेको देखिदैन् । युवालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण दिनानुदिन युवाहरु बैदेशिक रोजगारीको लागी पलायन भएको प्रष्ट देख्न पाईन्छ । यहाँ दैनिक जसो हुने राजनीतिक स्वार्थका बन्द हड्ताल हरुमा युवालाई मात्र प्रयोग गर्नु बिडम्बनाको कुरा हो । राजनीतिक बोलवालाकै कारण युवाहरुलाई राज्यका हरेक अवसरहरुबाट बञ्चित गराईँदै आएको छ तसर्थ युवा रोजगार नीति केबल नारामा मात्रै सिमीत नहोस । नेपाल सरकारले हालसम्म १०८ ओटा देशहरुमा बैदेशिक रोगारीको लागी खुला गरेको छ । तर अधिकांश युवाहरु भने साउदी अरब, मलेशिया, कतार, कुबेत, दुबई जस्ता खाडीमुलुक हरुमा जाने गरेका छन् । रोजगारीको लागी विदेशीएका युवाहरु मध्ये मलेशियामा अधिकतम रहेका छन् ।
बैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरु सरकारले स्वदेशमै युवा लाई रोजगार दिनको लागी युवा स्वरोजगारका लागी निकै कठिन भएपनि यसले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योग्दान पु¥याएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा बैदेशिक रोजगारी बाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा २९ प्रतिशत रहेको छ । अहिले नेपाली युवाहरुको लागी बैदेशिक रोजगार रहर भन्दा पनि बाध्यता भएको छ । देशमा रोजगारीका लागी अबसर हरु छैनन् न त शुरक्षीत ढङ्गले बस्नका लागी राजनीतिक बाताबरण नै छ । दिनानुदिनको बन्दले गर्दा देशको राजनीति प्रति नेपालीको मनमा बितृष्णा पैदा भएको छ । जसले गर्दा नेपालमा गरीखाने बाताबरण छैन् ।
नेपालमा लगानी गरेर धन आर्जन गर्ने अबस्था छैन त्यसैको बाफजुद दिनानुदिन युवाहरु रोजगारीको लागी बिदेश जान बाध्य छन् । रोजगारीको लागी बिदेश जान जति सजिलो छ त्यहाँ गएर काम गर्न र बस्नको लागी भनेजस्तो नरहेको बैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेश फर्केका युवाहरुको भोगाईबाटै प्रस्ट हुन्छ । एक त काम गाह्रो छ अर्को कुरा काम अनुसारको ज्याला नपाउनु झनै बिडम्बनाको कुरा हो जसले गर्दा नेपालीलाई उक्त जागीर नै निल्नु न उकेल्नु भएको छ ।
बैदेशिक रोजगार बिभागको गेट नजिकै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ नागरीक सहायता पिपुल फोरम बारे जानकारीपूर्ण बोर्ड जसले तपाईको फसेको पैसा तथा ठगीको बिरुद्धमा तपाईलाई निःशुल्क निबेदन लेख्न लगायत तपाईलाई चाहिने सम्पूर्ण कामको जिम्मा पिपुल फोरमले गरिदिनेछ जसले गर्दा तपाईको समयको पनि बचत हुनेछ भने तपाईको काम पनि छिटो र छरितो रुपमा सम्पन्न हुनेछ । बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको मुख्य सहयोगको रुपमा पिपुल फोरमलाई लिन सकिन्छ । तसर्थ देशमा खोलिएका ट्राभल एजेन्सि लगायत म्यानपावरहरुले अबैध रुपमा बैदेशिक रोजगारीको लागी पठाईरहेका छन तर उनीहरुले सोचेअनुसार भने त्यो हुन सकेको छैन् । धेरै तलब, ओभर टाईम, खाने, बस्ने सुबिधा तथा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको लोभमा पारेर सोझा र गरीबीको भूमरीमा परेका नेपालीहरुमाथि चरम लार्परवाही तथा ठगिएको पाईन्छ । दिनानुदिन नेपालमा नाम चलेका पत्रिकाहरुले ठूला ठूला अक्षरमा बिज्ञापनहरु छापेकै हुन्छ तर यसको निरीक्षणमा सञ्चार माध्यमको नै पहुँच पुगेको देखिदैन् । नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि गहन रुपमा लिईको पाईदैन् । तसर्थ नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीलाई ब्यबस्थित, भरपर्दो र विश्वसनिय बनाउनु जरुरी छ ।
रुपाकोट ३ बतासे, गुल्मी
हाल: गैँडाकोट नगरपालिका २, नवलपरासी
Comments comments	Related Posts	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	September 14, 2016	मिसन जिबी रोड “रातो लाईटको, कालो कहानी”...	July 30, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	राति १० बजे पछि देउसी–भैलो खेले कारबाही हुने
@gulminewsराति १० बजे पछि देउसी–भैलो खेले कारबाही हुने https://t.co/LfcdR5amOA #Gulminews #Gulmi11 hours agoRetweetगुल्मीको भार्सेमा भलिबल प्रतियोगिता जित्नेलाई रु ३३ हजार पुरष्कार https://t.co/atJt5qcIdx #Gulminews #Gulmi11 hours agoRetweetभिडियो: गुल्मी भार्सेको मौलिक संस्कृती सहितको सोरठी https://t.co/dcNhlcdFLf #Gulminews #Gulmi11 hours agoRetweetगुल्मीमा पहिलो पटक बालिका दिवस मनाईयो, बिद्यालय जान छोड्ने किशोरीको सँख्या बढ्दै https://t.co/tvPRU5mkb9 #Gulminews #Gulmi13 hours agoRetweetदलित गैह्र दलित विच विधिवत विवाहः फोटो फिचर https://t.co/FkQInKPIxc #Gulminews #Gulmi13 hours agoRetweet	गुल्मीको मौसम	Mostly Sunny	17 °C	26 Oct 2016